सरकारले आडभरोसा राख्दै गठन गरेको नीति सुधारक निकायले राम्ररी काम नथाल्दै अचानक राजीनामा दिनुभएछ । तोकिएको दरबन्दी पूरा नभई र स्थायीकार्यालय पनि सञ्चालनमा नआई राजीनामा दिनाको कारण केही थियो ?
तर, प्रतिष्ठानलाई पहिलो वर्षमा १५ वटा दरबन्दी दिइएको थियो । तर, यसलाई प्रक्रियामा ल्याउन र रिसर्चर नियुक्त गर्न भने प्रक्रियागत लामो कठिनाइ मैले पाएँ । 'हुन्छ, भइहाल्छ' भन्नु र घुमेर-घुमाएर कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियामा अल्झनु अर्को कठिन कुरा हो । विभिन्न मन्त्रालय घुमेर यो प्रक्रिया पूरा हुने कुरैमा ढिलाइ भो । यसमा मात्रै होइन, हाम्रो समग्र सरकार ढिलो छ । हामीलाई ताकेर यो ढिलाइ भएकोहोइन, समग्र पद्धतिमै ढिलाइ छ । १५ जनामध्ये ४ जना रिसर्चरचाहिँ एकदमै अनुरोध गरेर ६ महिनाका लागि भर्ना गर्न अनुमति पाएँ ।
यसो भनेर म कुनै फम्र्याटमा जवाफ दिन सक्दिनँ ।मैले धेरै त होइन, नयराज पन्तज्यूको गुरुकुल देखेको हुँ । उहाँका चेलाहरू महेशराज पन्त, दिनेशराज पन्त, ज्ञानमणि नेपाल आदि देखेको हुँ । ३० नम्बरे पढाइबाट बाहिरको जगत् थियो यो । कक्षाभित्र बसेर पढ्ने होइन किपाठ्यपुस्तकमा छिर्न सक्ने विद्यार्थी चाहियो । मेरो जिन्दगीको 'मकसद' यही हो भनेर कक्षामा छिर्नुपर्छ । काम नगर्ने, भाग खोज्ने प्रवृत्ति हामीमाझ बढ्यो । केही सही मान्छे प्रशासन क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ । तर, धेरैका लागि भने यो काम 'आतेपाते' मात्रै हो, जीवन गुजाराको उपायमात्रै हो भन्ने भएको छ । काममा भिड्ने बानी र पद्धति छैन धेरैसँग ।
हो, दलीयकरण, न्यून पारिश्रमिक र स्थायित्व अभावले विश्वविद्यालय थलिएको छ । म त भन्छु, खुलामञ्चमा उभिएर विषय हेरीकन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलेकुनै तालिका बनाएर भाषण दिनुपर्छ । पृथ्वीको निर्माण, मौसम परिवर्तनको संकेत, चन्द्रमामा मान्छेको पाइला आदिआदि विषयमा ।
यतिखेर तपाईंको प्राज्ञिक र बौद्धिक अभ्यासको थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि निकै बहसमा छ । नक्कली कृतिगतकुरा (प्लेइगरिजम्) देखि मी-टुको आरोप-प्रत्यारोप विश्वविद्यालयमा बढेको छ । यो विकृतिबारे प्राध्यापक स्वयंले किन बोल्न नचाहेका हुन् ? अथवा बोल्न नचाहेको हो ?
मूलतः यो समाजको जातै यस्तै हो । बोली हुदै नभएको होइन तर अलिक झिनो र मलिन भएको हो । स्वर एकदमै 'आइसोलेटेड' भयो, आ-आफू मात्रै भयो । मेरो पनि यस्तो बोली उठाउने, बहस गर्ने सर्कल खासै छैन । कहिलेकाहीं चाबहिलमा चिया खान निस्कँदा यस्तो सर्कल भेटिन्छ, बरु कीर्तिपुर क्याम्पसमा भने यस्तो सर्कल थोरबहुत छँदै छ । त्यही कारण अवकाश पाइसकेको यो उमेरमा समेत एउटा/दुइटा क्लास लिने बहानामा भएपनि कीर्तपुर गैरहन मन लाग्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७६ ०८:१७